Kitra afrikanina : nomontsanin’ny Aduana 6 no ho 1 ny Fosa Jr | NewsMada
Kitra afrikanina : nomontsanin’ny Aduana 6 no ho 1 ny Fosa Jr
Ho sarotra ny lalao miverina. Nomontsanin’ny ekipa ganeanina Aduana Stars tamin’ny isa mavesatra 4 no ho 1 ny tompon’amboaran’i Madagasikara, Fosa Junior. Lalao mandroso natao tany amin’ny kianja Agyeman Badu Stadium, omaly.
Nampiditra ny baolina voalohany ny solontenantsika tamin’ny alalan’i José Alain, minitra fahefatra. Tsy niandry ela anefa izany fa nosahalain’ny tompon-tany teo amin’ny fahasivy minitra. Totoafo ny fanafihan’ny Aduana Stars ary haingana ny fomba filalaon’izy ireo. Vokany, nanao hadisoana tao amin’ny faritry ny 16 mn i José Alain. Nanondro ny “penalty” ny mpitsara zambianina. Tafiditr’i Adams soa aman-tsara izany, minitra faha-33. Nanao hadisoana indray koa ny mpiandry haraton’ny Fosa Jr, Damien, ka nahazoan’ny Ganeanina penalty. Mbola nampidirin’i Adams indray koa izany, minitra faha-40. Io isa 3 no ho 1 io ny nisarahan’ny roa tonta teo am-pialan-tsasatra.
Tsy nijanona teo anefa izany. Nanao hadisoana faharoa, niakatra indray, i Damien ka nahazoan’ny Aduana Stars penalty, minitra faha-61. Mbola niampy roa indray izany taty amin’ny minitra faha-85 sy 86. 6 no ho 1 teo. Nandany fotoana ny Ganeanina. Nisy fotoana koa anefa efa nidona amin’ny tsivalamby na tsatoby ny dakan’ny Ganeanina. Niezaka nanafika ihany kosa ny Malagasy tamin’ny fampidirana an’i Rado Kely, nisolo an’i José Alain. Nanao ny ho afany koa i Dax, saingy tsy nahitam-bokany hatrany izany.
Araka izany, ho sarotra ny lalao miverina afaka 10 andro, manoloana io vokatra mavesatra nozakain’ny Fosa Jr io. Mila mandresy amin’ny isa mavesatra ary tsy mampitoko ny Ganeanina isika raha te handeha amin’ny dingana manaraka hidirana anaty lalaom-bondrona.